Fitsapana bateria eo anelanelan'ny iOS 14.6 sy iOS 15 beta 1 | Vaovao IPhone
Maro ireo mpampiasa izay aorian'ny fametrahana ny kinova farany misy an'ny iOS 14, iOS 14.6 amin'izao fotoana izao, dia manamafy fa ny androm-piainan'ny baterian'izy ireo efa nihena be, na dia rehefa tsy mampiasa ny terminal ry zareo, olana izay toa tsy eken'ny Apple hatramin'ny andro vitsy lasa izay nijanona tsy nanao sonia ny iOS 14.5.1.
Noho ireo olana amin'ny fiainana bateria ireo dia maro ireo mpampiasa izay mieritreritra ny hametraka ny beta voalohany iOS 15, hanamarinana raha voavaha ny olan'ny bateria, na dia beta aza ary ao amin'ny beta voalohany. Ireo tovolahy ao amin'ny iAppleBytes dia nanao ity fitsapana ity ho anay.
Ireo tovolahy ao amin'ny iAppleBytes dia nanao andrana tamin'ny maodely iPhone 6s, iPhone 7 ary iPhone SE 2020 hanamarinana izany. Indrisy, tsia ny valin'io fanontaniana io. Ny androm-piainan'ny fitaovana roa dia mitovy amin'ny fitaovana rehetra.
iTelefaona 6 miaraka amin'ny iOS 14.6: Adiny 1 sy 49 minitra. 100% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
iPhone 6s miaraka amin'ny iOS 15: Adiny 1 sy 53 minitra. 100% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
iPhone 7 miaraka amin'ny iOS 14.6: 3 ora sy 28 minitra. 100% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
iPhone 7 miaraka amin'ny iOS 15: 3 ora sy 38 minitra. 100% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
iPhone SE 2020 miaraka amin'ny iOS 14.6: 3 ora sy 42 minitra. 91% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
iPhone SE 2020 miaraka amin'ny iOS 15: 3 ora sy 41 minitra. 91% fatran'ny bateria farany ambony. Ny haavon'ny gloss amin'ny 25%.
Miaraka amin'ny fanombohan'ny iOS 15, kinova izay hahafahantsika mametraka ao amin'ny iPhone 6s sy iPad Air 2, maro ireo mpampiasa izay tsy resy lahatra amin'ny fanavaozana, satria mety ho coup de Grace ho an'ny terminal izany. Na izany aza, toa izany Niasa Apple mba tsy hitrangan'izany araka ny hitantsika tao fitsapana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 14 » Fitsapana bateria eo anelanelan'ny iOS 14.6 sy iOS 15 beta 1